Sidee si ay u gudbiyaan Iibsasho wax ka iPhone in Lugood
Halkaas oo ay dadku inta badan gadaysaa Music, Movies, Apps u iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan Iibsasho ka Lugood
Sidee si ay u gudbiyaan kale iibsaday Music
Waxaa jira dhowr suuqyada Music laga heli karaa iPhone, kaas oo dadka ka iibsan kartaa music iyo iyaga kala soo bixi kartaa si ay u isticmaalaan. Ka mid ah, liiska 3 music suuqa waa sida soo socota:
VUDU Player, app dhammaataan loogu talagalay loogu tala galay macruufka ah 7.0 ama ka dib iyo jaanqaadi iPhone, iPad, iPod iyo taabashada. App Tani waa filaayo in iPhone 5, iPhone 6 (Plus), iyo iPhone 6s (Plus).
• kuu ogolaanaysaa inaad isla daawado filimada ugu dambeeyay oo muujinaya TV
• Kartida in la daawado online ama in offline raaxaysan
• Taageerada ultraviolet movie loo maqli karo, Disney Movies meel loo maqli movie iyo geeyo Chromecast
• si dhakhso ah, waxtar User Interface hooyo
• Maktabada Sort alphabetically, taariikhda la iibsaday, ama taariikhda loo sii daayo
URL : http://www.vudu.com/
CDBaby waa madal la yaab leh taageero weyn u ah fanaaniinta madax banaan oo kasoo muuqday 850 qaybaha miyuusik u gaar ah
Adeegyada Muhiimka ah
• Download MP3 heli karo 320 oo FLAC Files
• Best dukaanka madax banaan music
• dukaanka Online music takhasusay iibinta heesaha iyo CD-yada ka fannaaniin madax banaan si ay macaamiisha
• dukaanka A Wonderful online inay iska iibiso music in ka badan 95 dukaan digital
• awood qaybsiga music ka hal meel sida kale
Bandcamp waa suuq music cajiib ah, taas oo u baahan macruufka 6.0 iyo ka dib. Bandcamp waa la jaan qaada iPhone, iPad, iPod iyo taabashada. App Tani si weyn filaayo in iPhone 5, iPhone 6, iyo iPhone 6 Plus
• Waxa uu ku siinayaa deg dega ah, helitaanka geeyo aan xad lahayn si aad u iibsadaan Bandcamp
• Category badan ee music by farshaxan kala duwan oo ka dhan dunida dacaladeeda
• radio show Wonderful, Weekly Bandcamp la heli karo
• In ka badan 1.7 milyan oo albums oo 13.5 milyan oo kuwan raadkaygay laga heli karaa Bandcamp
Waxaa loo baahan yahay • Bandcamp taageere account in aad dhegaysato ururinta
Habka kala iibsiga ee iibsadaan ka Lugood waxaa la samayn karaa iyada oo loo marayo habab kala duwan. Habka rasmi ah hanaanka wareejinta waa sida soo socota:
• Isku qalab si aad u computer ah. Sug icon in ay u muuqdaan in Lugood.
• Markaasuu u tag File guji Devices.
• Dooro Iibsasho Transfer ka qalab aad iyo aad samaysay habka
Si kastaba ha ahaatee, habkan u shaqeeya files ka iibsaday iyada oo Lugood iyo waxyaabaha kasta oo aad keeno ka CD ama ilo kale oo aan nuqul doonaa qalab aad maktabadda Lugood ah.
Top kala iibsiga music kale soo iibsatay, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u hagaagsan qalab aad la qalab aad files wareejinta. Geedi socodka syncing sax ah waa waajib u kala iibsiga ee music kale iibsaday.
TunesGo Wondershare, waa saaxiibka cajiib ah oo Lugood iyo in la isticmaali karo si fudud u wareejinta habboon ee music ka qalabka macruufka aad.
Iibsiga ee music ka qalabka macruufka in Lugood iyo qeybsanaan ku xigeenka. Waa aalad wax badan waxtar u leh suuqa kala iibsiga saxda ah ee muusiga iyo waa heer sare waxtar u kala iibsiga ee music ka Lugood in qalab, ama ka pc ama Mac qalab. Waxa kale oo music ka qalab kasta oo loo bedeli karo Lugood iyo qalab si PC ama Mac.
Hanaanka wareejinta ee music ka Lugood in qalab la samayn karaa iyada oo talaabooyinka soo socda:
• Riix Music Transfer ee bogga default guriga, ka gala Music page Transfer sida ugu dhaqsaha badan qalabka ku xiran
• Riix Import ka dibna dooran Import ka Lugood
• Dooro playlists aad rabto in lagu wareejiyo ka Lugood in qalab, riix OK
Wixii Music Transfer ka PC in Device ah, waxaad u baahan tahay in la raaco tallaabooyinka hoos ku xusan:
• Riix Music Transfer , gali bogga Music Transfer ka dib markii qalab ku xiran tahay;
• Riix Import , Select Import ka PC / Mac ;
• Dooro files music on PC / Mac via Explorer Window File ah, riix OK iyo muusiga waxaa loo wareejin doonaa qalab aad
Wixii Music Transfer ka Qalabka inay Lugood, waxaad u baahan tahay in la raaco tallaabooyinka hoos ku xusan:
• Riix Music Transfer ee bogga default guriga, ka gala bogga Music Transfer mar qalabka ku xiran;
• Hubi oo dhan playlists ama heeso kuwa inay u dhoofiyaan si Lugood, guji dhoofinta> dhoofinta in Lugood.
Ka Device Bedelka Music inay PC ama Mac
• Hubi oo dhan playlists ama heeso kuwa inay u dhoofiyaan si Lugood, guji dhoofinta iyo markaas dhoofinta in PC ama Mac
> Resource > Lugood > 2 Methods si ay u gudbiyaan Iibsasho ka iPhone in Computer